Mootummaan Oromiyaa koree deeggarsa lammii buqqa'eef godhamu qindeessitu dhaabe - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Mootummaan Oromiyaa koree deeggarsa lammii buqqa’eef godhamu qindeessitu dhaabe
Mootummaan Oromiyaa koree deeggarsa lammii buqqa’eef godhamu qindeessitu dhaabe
Mootummaan Oromiyaa koree deeggarsa qindeessituu fi lammii buqqa’ee deebisanii dhaabuu irratti hojjattu dhaabuu isaa ifa godhe. Koreen tuni deeggarsi karaa iftoomina qabuun wolitti qabamuu isaa fi kaayyoo barbaadamuuf ooluu isaa mirkaneessuu irratti hojjatti. Kayyoon koree tanaa inni biraa deeggarsi eegalame cimee akka itti fufuuf tooftaa baastee hojjachuudha. Koreen tuni akkaataa lammii buqqa’e deebisanii gadi dhaabuun danda’amu irrattis yaada ni dhiyeessiti. Ammas, gamtaa Oromoo cimsuu fi hariiroo Oromoo fi saboota biraa jidduu jiru gabbisuu irrattis hojjachuudhaaf koreen tuni dirqama fudhatteerti.
Koreen tuni namoota hawaasa Oromoo biratti fudhatama qaban uf keessatti kan ammatteedha. Bifuma kanaan:
1.Dr. Abarraa Dheeressaa (walitti qabaa)
2.Kab. Obbo Isheetuu Dassee (I/A/walitti qabaa)
3.Obbo Tolosaa Daggafaa (Barressaa)
4.Obbo Abarraa Tolaa (Miseensa)
5.Qasis Balaay Mokonnin (Miseensa)
6.Abbaa Gadaa Bayyanaa Sambatoo (Miseensa)
7.Luba Yoonaas Yigezzu Dhibbisaa (Miseensa)
8.Sheek Ahimad Zaakir (Miseensa)
9.Pastar Bojaa (Miseensa)
10.Obbo Dinquu Dayyaas (Miseensa) miseensota koree tanaa ta’anii filatamaniiru.
Koreen tuni carraaqqii lammii deebisanii dhaabuuf godhan hunda keessatti milkaayina hawwinaaf.
Previous articleBBC’n Tamsaasa Raadiyoo Afaan Oromoo Guyyoottan Muraasa Keessatti Akka Eegalu Beeksise
Next articleDargaggoonni Oromoo %77 carraa barnoota sadarkaa 2ffaa hin argatan